ओटो ब्राण्डको फिचर फोन 'रियो' बजारमा, विशेष डकमार्फत फोन चार्ज हुने - Mobiles Khabar
ओटो ब्राण्डको फिचर फोन ‘रियो’ बजारमा, विशेष डकमार्फत फोन चार्ज हुने
मोबाईलस् खबर २६ माघ २०७३, बुधबार १२:३६
काठमाडौं, २६ माघ । नेपाली बजारमा भर्खरै मात्र भित्रिएको नयाँ मोबाइल ब्राण्ड ओटोले (OTTO) नयाँ फिचर फोन सार्वजनिक गरेको छ । जयमाँ इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले बजारमा ओटो रियो (OTTO Rio) फिचर फोन उपलब्ध भएको जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीले यसलाई स्मार्टफोनको सम्पूर्ण पुरकको रुपमा रहेको दाबी गरेको छ ।
प्रिमियम फिचर फोनको रुपमा आएको ओटो रियोमा टियानमा स्ट्रङ ग्लाससहितको २.३ इन्चको कभ्र्ड स्क्रीन छ भने एलईडी टर्च पनि राखिएको छ ।
अडियोका लागि छुट्टै किहरुको प्रयोग गरिएको छ भने यसमा १,५०० एमएएचको ब्याट्री राखिएको छ ।
ड्यूल एलईडी फ्ल्याश भएको फिचर फोनमा ड्यूल सिम प्रयोग गर्न सकिन्छ । मिडियाटेकको चिपसेट प्रयोग गरिएको फोनमा ३२ एमबीको र्याम तथा ३२ एमबीकै स्टोरज छ, जसलाई बढाएर ३२ जीबीसम्म पुर्याउन सकिने कम्पनीको भनाई छ ।
यो फिचर फोनको सबैभन्दा मुख्य विशेषता भनेको यसलाई चार्ज गर्न विशेष किसिमको डक साथमा आउँछ । फोनको डकमा यो ओटो रियोलाई राखेपनि आफैं चार्ज हुनेछ ।
एमपी थ्री, एमपी फोर सपोर्ट गर्ने तथा वायरलेस एफएम राखिएको ओटो रियो फिचर फोन बजारमा तीन रंगहरुमा उपलब्ध छ भने यसको मूल्य रु. २,८९६/– तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
Feature Phone Jaima Intercontinental Pvt. Ltd. OTTO Rio २६ माघ २०७३, बुधबार १२:३६
Previous: अब आइफोनमा पनि टेलिकमको फोरजी चल्ने, यसरी गर्नुहोस सेटिंग
Next: फाइभ जी प्रविधिको लोगो यस्ताे छ,नयाँ पुस्ताकाे मोबाइल नेटवर्क प्रविधि